Muxuu ka yiri Mohamed Salah kaddib saddeleydii uu ka dhaliyay Leeds United?? – Gool FM
Dajiye September 12, 2020
(Liverpool) 12 Sebt 2020. Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ka hadlay guushii ay ka gaareen naadiga Leeds United, taasoo ay kaga furteen kal ciyaareedkan 2020-21 ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield, kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan 2020-2, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-3.
Mohamed Salah oo inta ay ciyaarta socotay dhaliyay saddex gool ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Way adkeyd in la ciyaaro kulanka ay ka maqnaayeen taageerayaasheena, gaar ahaan marka aan ku ciyaareyno Anfiel iyadoo taageerayaasheena aysan xaadirin aheyn”.
“Waxaan wajahnay koox adag caawa, si xoogan ayey noo cadaadiyeen, ma aheyn inaan la kulano saddex gool”.
“Sidaas oo ay tahay waxaan soo bandhigtay ciyaar fiican iyo shaqo tayadeedu aysan yareen”.
“Ma aanan dareemin wax cadaadis ah inaan tuuro rigooradii labaad, waxaan horay uga dhaliyay rigoore finalka Champions League, waxaa muhiim ii ah inaan diirada saaro sidii aan u dhalin lahaa kubadahaas oo kale iyo inaan helo dhibco”.
“In Leeds United ay naga dhalisay saddex gool ayaa ah wax weyn, waxaan dareemayaa inaan ku faraxsanahay natiijada ciyaarta, laakiin waa inaan horumar sameynaa”.